'न्यायको आशा जगाएको छ'- भिडियो - कान्तिपुर समाचार
'न्यायको आशा जगाएको छ'
काठमाडौं — द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हनन्को बिरुद्धमा लामो समयदेखि क्रियाशिल अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्मा मैना सुनुवारको मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालतले गरेको फेसलाले आशावादी बनाएको बताउँछिन् । काभ्रे जिल्ला अदालतले मैनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गर्दै तीन जना तत्कालिन सैनिक अधिकारीलाई जन्मकैदको सजाय फैसला गरेको छ । यस फैसलाले के देखाउँछ ? यसपछिको परिणाम कस्तो होला ? शर्माको टिप्पणी:
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७४ १९:१६
सुतेकै ठाउँबाट डेढ वर्षीय बालक बेपत्ता
धादिङ — राति आमाबाबुसँगै सुतेका डेढ वर्षीय बालक बुद्धिलाल चेपाङ बेपत्ता भएका छन् । धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँपालिका– ३ बागुराङमा यस्तो घटना भएपछि स्थानीय चकित भएका छन् ।
घर भूकम्पले भत्काएको कारण चेपाङ परिवार टहरामै रात बिताउँदै आएको थियो । आमाबुवासँगै सुतेका बालक हराएपछि परिवारजन चिन्तित छन् ।
बालक बुद्धिलाल सोमबहादुर चेपाङ र मनमाया चेपाङका कान्छा छोरा हुन् । जेठो छोरा ३ वर्षका छन् । दुवै छोरा आमाबुबासँगै सुतेका थिए ।
‘टहराको ढोका छेउमा आफू सुतेर श्रीमती र छोरालाई कुनापट्टी सुताएको थिएँ’, सोमबहादुरले भने, ‘बिहान २ बजे ब्यूँझिदासानो छोरा ओछ्यानमा थिएन ।’ आफनै काखमा सुताएको छोरा एकाएक हराएपछि आमा मनमाया अचेत जस्तै बनेकी छन् ।
डेढ वर्षीय वालक वुद्धिलाल राम्रोसंग हिडडुल गर्न समेत नसक्ने भएकोले आमाबुबा निद्रामा भएको बेला बच्चा चोरी भएको वा वन्यजन्तुले लिएको हुन सक्ने अनुमान गाउँलेहरूले लगाएका छन् ।
बालक हराएपछि रातिदेखि नै गाउँलेहरुले खोजी गरिरहेका छन् । घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी चौकी ताल्तीबाट प्रहरीको टोली गाउँँ पुगेको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक बरुणबहादुर सिंहले बताए ।